"..Xubnaha ugu hadal haynta badan ee xukuumada Madaxweyne Muse Biixi". Xuseen Xasan Badmaax
Saturday December 02, 2017 - 20:42:35 in Wararka by Super Admin
Xubnaha loogu hadal haynta badan yahay.
Shacabka Jamhuuriyada Somaliland waxay isku
raacsan yahay,loogana fadhiyaa Md.Madaxweyne Muse iyo Md.kuxigeen Saylaci inay soo dhisaan xukuumad tiro yar
oo tayo leh,kana kooban wejiyo cusub.Hadaba xogo lagu
kalsoon yahay ayaa naga soo gaadhaya xubno miisan culus ku leh xisbiga kulmiye.Siday xogahaasi tibaaxeen
xubnaha loogu hadal haynta badan ayaa ah:
1.Prof.Maxamed Xuseen Cusman(Mua’adinka).
2.Garyaqaan Jaamac Ismaaciil Cige(Shabeel).
3.Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen.
4.Prof.Axmed Ismaaciil Samatar.
5.Mj.Maxamed Axmed Kaahin.
6.Aqoonyahan Mustafe Xudur.
7.Aqoonyahan Xuseen Adan Cade.
8.Aqoonyahan Cali Maxamed Cali.
9.Aqoonyahan Maxamed Cali Bile.
10.Aqoonyahan Axmed Muumin Seed.
11.Aqoonyahan Maxamed Jabarti.
12.Aqoonyahan Xasan Gaafaadhi.
13.Aqoonyahan Cabdi-najax Siyaad Cabdi
15.Aqoonyahan C/qaadir Dhegaweyne.
Md.Madaxweyne Muse iyo Md.Kuxigeen Saylaci
lagama warar rasmi ah. Uf Anaa Leh Qabyaalad.